Tatitry ny Praiminisitra: Ezahina hotazonina 6,2% ny tahan’ny vidim-piainana | NewsMada
Tatitry ny Praiminisitra: Ezahina hotazonina 6,2% ny tahan’ny vidim-piainana
Nitatitra ny ezaka vita eo ampin’ny toekarena sy ny vina amin’ity taona ity ny Praiminisitra Ntsay Christian, omaly, tamin’ny Antenimieram-pirenena. Nofaritana ny harinkarena faobe sy tahan’ny sondrom-bidy.
Na teo aza ny ny fiverenan’ ny valanaretina fanindroany eto Madagasikara nanomboka ny volana marsa tamin’ity taona ity, nofaritana ho +4,3% amin’izao fotoana izao ny fiakaran’ny harinkarena faobe raha -5% (miiba) eo ho eo izy tamin’ny taon-dasa, araka ny nambaran’ny Praiminisitra. Ezahana hotazonina 6,2% ny tahan’ny vidim-piainana amin’ity taona 2021 ity, sy ny fitanana ny volantsika Ariary ho marin-toerana ho fitsinjovana ny fanarenana indray ny toekarena eto amintsika, araka ny tatitra nataony ihany. Miankina indrindra amin’ny sandan’ny vola Ariary io ny tahan’ny vidim-piainana.
Nasian’ny Praiminisitra teny ny momba ny fampidiran-ketra (pression fiscale), koa raha 9,8% ny tahan’ny famorian-ketra tamin’ny taon-dasa, dia 11,4% no tanjona amin’ity 2021 ity. -6,5% kosa ny tsy fifandanjan’ny vola miditra sy mivoaka amin’ny tetibolam-panjakana ankapobeny. Ny politika momba ny vola, hoy ny Praiminisitra, natao hifantoka amin’ny fitsinjovana ny fomba mahomby hanarenana indray ny toekarena eto amintsika ka hiteraka asa sy vola miditra ho an’ny orinasa, ho an’ny mpandraharaha, ary ho an’ny tanora amin’ny fampiasam-bola eo amin’ny seha-pihariana marobe amin’ny alalan’ny tetikasa sy ny fandaharanasam-panjakana.
Vita tanteraka ny fananganana sy ny fampitaovana ny “Hôtel des finances” ao Sambava, fotodrafitrasa mifandraika amin’ny politika momba ny toekarana. Eo am-pananganana ny “Hôtels des finances” isika amin’izao fotoana izao any Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa, Taolagnaro, ary Toliara. Nohatsaraina ny toeram-piasan’ny Foiben’ny Tahirim-bolam-panjakana eto Antananarivo-Renivohitra.
Tsy mbola afaka mivelatra ny fandraharahana
Raha ny fanazavan’ny Praiminisitra, mbola misy fiantraikany goavana amin’ny firenentsika ny valanaretina izay mahazo ny eran-tany. Mbola ambany dia ambany ny tinady eo amin’ny tsena iraisam-pirenena ary tsy mbola afaka mivelatra ny fandraharahana sy ny famatsiam-bola avy amin’ny sehatra tsy miankina noho ny fisian’ny fisalasalana maro samihafa. Koa asa na ho tratrantsika io +4,3 % amin’ny harinkarena faobe io. Ny fahantrana sy ny tsy fananan’asa aloha no mora kajiana. Ny vidin’ny PPN no hitan’ny vahoaka amin’ny vidim-piainana.